Waa sidee xaaladda Gaalkacyo kadib heshiiskii ay shalay kala saxiixdeen madaxda labada dhinac? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Waa sidee xaaladda Gaalkacyo kadib heshiiskii ay shalay kala saxiixdeen madaxda labada dhinac?
Wararka maanta naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in magaaladaasi ay xaaladeedu tahay mid aad u degan, kadib dagaalo iyo colaado muddo soo jiitaamayay oo halkaasi ka jiray.
Goobaha ganacsi ee ka jiray magaalada Gaalkacyo ayaa maanta la arkayaa in dib loo furay, iyadoona isku socodka dadka iyo gaadiidka maanta uu yahay mid si caadi ah u shaqeeynaya.
Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa maalintii shalay heshiis dhowr qodob ka kooban ku kala saxiixday magaalada Gaalkacyo, kaas oo xal kama dambeys ah looga gaarayo colaada iyo dagaalada ka jira magaaladaas.
Dhinaca kale, waxaa maalmaha soo socdo la filayaa in magaalada Gaalkacyo ay dib ugu soo laabtaan dhamaan dadkii ka barakacay, iyadoo sidoo kale maamulada Puntland iyo Galmudug looga fadhiyo inay fuliyaan qodobadii ay ku heshiiyeen.
Heshiiskaasi ayaa waxaa ku jiray qodobo ah in lakala qaado meelaha ay isku hor-fadhiyaan ciidanka labada dhinac iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo waxyaabaha keenaya xiisadda colaadeed.
Ilaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doonno, balse waxaa 20-ka bishaan aynu ku jirno ee November la filayaa in madaxda Puntland iyo Galmudug ay kulan kale ku yeeshaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose, si loo sii amba-qaado heshiiska nabadeed oo ay labada dhinac kala saxiixdeen.